Biyya 'TB'rraa walaboomte uumuuf socho'amaa jira
Walfalmii foddaan haabanamuufi hinbanaminii konkolaataa keessatti ka'u, mallattoolee dhibee 'TB' faalamaa dhibechaarratti mul'atuufi walfalmii maatii gidduutti ka'u takka utaalloodha takka qorra jedhamu, mana yaalaas dhaqamee wal'aansa erga argatanii dawaa fudhachuu eegalanii, dawaa addaan kutuun dhibechaaf caalaa saaxilamaaa adeemuu namootaafi kkfn rakkoolee tatamsa'ina dhibichaatiif sababa ta'an bifa diraamaafi faaruutiin dhiyaatanii, hubannoo hawaasaa gabbisuufi haalli qabatamaa hawaasa keessatti mul'atu argisiifameera.
Waltajjiin Yaa'ii qorannoo 'TB' 12fafi kabaja guyyaa 'TB' addunyaa galmaa Yunivarsitii Finfinneettii Kibxata darbe qophaa'e qorannoowwan dhibicha dhabamsiisuufi to'achuun danda'amurratti qorattoota garagaraatiin dhiyaatanii irratti mari'atamaniiru.
Ministir Deetaan Ministeera Eegumsa Fayyaa Dr. Kabbadaa Warquu akka jedhanitti, kaayyoon waltajjichaa dhibee 'TB'rratti to'annoo babal'ina dhibichaarratti hanqina mul'atu, qorannoofi qo'annoodhaan akka deggaraman gochuu, hojmaata haarawaa qindoominaafi haala hundumaa hirmaachiseen hojiirra oolchuun, tatamsa'ina dhibechaa hir'isuufi. Akkasumas, tajaajila kennamurratti caalaa akka xiyyeeffatamu hubachiisuufi jijjiirama ilaalchaafi hojmaata haaraa hojiirra oolchuun manii qabametti akka qajeelu gochuufi.
Akkasaan jedhanitti, biyyoota addunyaa dhibichi keessatti babal'ate 30 keessaa Itoophiyaan tokko yoo taatu, ittisaafi to'annoo dhibichaaf xiyyeeffannaan addaa kennamee irratti hojjetamaa jira. Qaama karoora damee fayyaa kan ta'e karoorri dhibee 'TB' ittisuufi to'achuu, Itoophiyaa dhibee 'TB'rraa walaboomte uumuuf ciminaan socho'amaa jira.
Akka ibsaasaaniitti, mootummaan hojiilee dhibicha dhabamsiisuuf hojjechaa jiru keessaa dhaabbilee fayyaa wal'aansaafi qorannoo dhibichaa babal'isuu, dawaaleefi teknolojiiwwan qorannoo barbaachisoo ta'an dhiyeessaa jira. Dhaabbilee fayyaa qorannoo dhibee 'TB' dawaa dandamatu babal'ifamaa jiraachuu eeranii, tajaajilli kunis hospitaalota 46tti kennamaa jira.
Dhibee 'TB' dawaa dandamatu adda baasuuf dhaabbileen tajaajila laaboraatootii kanaa kennan sagal ga'uu himanii, teknolojii kanaaf barabaachisaa ta'es dhaabbilee fayyaa 146f dhiyeessuun tajaajilli kun kennamaa akka jiru dubbataniiru.
Biyyattiitti dhibeen 'TB' dawaa dandamatuu mudachuun yaaddoo akka ta'e eeranii, to'annoofi ittisa dhibechaarratti hirmaannaa hawaasa hundaafi dhaabbilee tajajajila kana kennan babal'isuu barbaachisa jedhaniiru. Qorattoonnis gahee isaanirraa eegamu akka bahatan gaafataniiru
Bakka bu'aa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa Dr. Akpaka A. Kalu wantin diraamaafi faaruu dhiyaaterraa hubadhuu “fala barbaachuuf wayita bo'amuudha” jedhanii “tatamsa'ina dhibee 'TB' dhaabuuf haa tokkoomnu” jedhaniiru.
Dr. Kaaluun waggootaa 70 dura abbaansaanii dhibee TBtiin du'uu yaadachiisanii, waggoota 70 booda namni kamiyyuu dhibee TBtiin du'uu hinqabu jedhanii, du'i dhibichaan mudatu kamiyyuu ragaa dadhabina keenya mul'isuudha. Teknolojiifi qabeenyi utuu jiruu namni kamiyyuu dhibechaan du'uu akka hinqabne eeraniiru.
Akkasaan jedhanitti “Itoophiyaan fooyyessa qorannoo dhibicha to'achuuf taasisuusheerratti gaaffii hinqabu” jedhanii miidhaafi du'i qaqqaabuu biyyattiitti hir'achuu ragaa bahanii, lammiilee biyyattii kuma 100 keessaa namoonni 26 dhibechaan ammayyuu du'aa jiru jedhan.
Guyyaan dhibee 'TB' addunyaa dhaadannoo “Tatamsa'ina dhibee 'TB' tokkummaan haa dhaabnu” jedhuun kabajameera.
Torban kana/This_Week 7917
Guyyaa mara/All_Days 1292428